November 2018 | Pyithu Hluttaw
Nov 30, 2018/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်း Innovations in Legal Empowerment (NAMATI) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Nov 29, 2018/
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦး အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန် Ms.Sarah Grebowski အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် UK အောက်လွှတ်တော်မှ ပညာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Mr. Neil Carmichaelဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်း နှင့် တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့် တို့ ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Nov 27, 2018/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ ကွန်ဂရက်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Tondrub Wangben အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tondrub Wangben နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Lee Sang- hwa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် UK အောက်လွှတ်တော်မှ ပညာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Mr. Neil Carmichael ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကျေးလက် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်းတို့ ဂရိတ်ဝေါကုမ္ပဏီ လီမိတက်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Christian LECHERVY နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးဌာနအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr.Hubert COL
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Parami Energy Service Co.,Ltd မှ ဒါရိုက်တာ ဦးပြည့်ဝထွန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GIZ အဖွဲ့အစည်း၏ Head of Program ဖြစ်သူMr. Armin Hofmann အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစော ရန်ကုန်မြို့၊ အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန် Mr.Ian Mackenzie အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
Nov 13, 2018/
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မောင်သောင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလူမျိုးစုရေးရာကော်မရှင်မှ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Li Changping အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Nov 08, 2018/
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Christian LECHERVY အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးရာကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Zhu Mingchun နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် EuroCham Myanmar အဖွဲ့၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Marc de la Fouchardiere အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Nov 05, 2018/
Nov 01, 2018/